Password တဲ့လား! - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Password တဲ့လား! ဆိုဒါ Ubuntu Live CD နှင့် Windows Password ကိုယ် ခနလေးအတွင်းမှာ ဖြုတ် ဒါရယ်၊၊ ပြီးရင် ကျနော်တို့ Ubuntu Password ကိုယ် ဖြုတ်နည်းတွေ အများကြီးထဲက2မိနစ်လောက် အတွင်း ဖြုတ် တတ်အောင်ဆိုဒါလေးကိုယ် ကျနော့်ဘာသာ မှတ်ထားတဲ့ စာအုပ်လေးတွေကိုယ် မိသားစုဝင်တွေ ဆီကိုယ် ပြန် လည်ဝေမျှခြင်း ဖြစ်ပါတယ်၊၊ အသုံးလိုသူများ အရေးကြုံလာရင် သုံးချင်သူများ ဒါမှမဟုတ်လည်း တခြားသူကိုယ် ညစ်ချင် သူများအတွက်လည်း အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်၊၊ windows7password ဖြုတ်ဒါကိုယ်တော့ ကျနော် ဒီနေရာလေးမှာ တခါ ဆွေးနွေးထားပါတယ်၊၊ ခုစာအုပ်ထဲမှာ 32/64 bit အတွက် အစုံအလင် ထည့်ပြီးတော့ အသေအချာ လေးဖြစ်အောင် ကျနော် ပြုလုပ်ထားပါတယ်၊၊
1.Change or Reset Windows Password fromaUbuntu Live CD
Ubuntu Live CD (သို့) Live USB နှင့် Windows Password ကိုယ် မိမိစိတ်ကြိုက် ဖြုတ်ချင်ဖြုတ်မယ်၊၊ ချိန်းချင် ရင်ချိန်းမယ် စဒါတွေပြုလုပ်မဲ့ စာအုပ်လေးကိုယ်တော့ အောက်မှာ ရယူလိုက်ပါ၊၊
Download Interupload(0.99 MB)
2.Resetting A Forgotten Password In Ubuntu Linux
Ubuntu Linux Password မေ့သွားလို့ ပြန်သွင်းမလို့တဲ့ဗျာ၊၊ တကယ်လားဆိုပြီး မေးလိုက်တော့ ၊၊ တကယ်ပါ တဲ့၊၊ ကြားဖူးနားဝတွေ ကိုယ်တကယ်ပြောတော့ ပြောရှာပါတယ်၊၊ Linux ကသိပ်ပြီးတော့ case sensitive ဖြစ်ဒါတွေကော အရမ်းလန်းဒါတွေကော ဟုတ်တိပတ်တိ တော့ ပြောသွား ရှာပါ တယ်၊၊ တကယ်သုံးချင်သေးတယ်ဆိုရင် ပြန်မတင်ပါနှင့်လို့ ကျနော် လိုက်ပြီးတော့ မိနစ်အနည်းငယ် အတွင်း ပြန် လည် အိုကေသွားအောင် လုပ်ပေးပါမယ်လို့၊၊နည်းတွေ အများကြီးထဲက အမြန်ဆုံးနည်းလေးလို့ ထင်ပါတယ်၊၊
စာအုပ်ကိုယ် အောက်မှ ရယူပါ၊၊
ကျနော် လုပ်ထားတဲ့ စာအုပ်တွေကိုယ် မိမိနှစ်သက်ရာ နှစ်သက်သလို မျှဝေပါ ပြင်ဆင်ပါ ဖော်ပြပါ၊၊ စိတ်ကြိုက် လုပ်ဆောင်ပါလို့ ကျနော် အကြုံပြုတိုက်တွန်းပါတယ်၊၊ အဆင်ပြေလို့ Credit လေးများ ပေးရရင် ကောင်းမလား လို့စိတ်ထဲမှာ အတွေးကလေး ဝင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျနော်ရဲ့ဖိုရမ်ဖြစ်တဲ့ www.myanmarfamily.org (သို့) ကျနော့် ကလောင် kyaukphyu ဆိုတဲ့စာလေးအနည်းအကျဉ်းလေးကိုယ် စာရိုက်ဖော်ပြပေးပါ လို့ တောင်းဆို ချင်ပါတယ်၊၊
ကျနော် တို့ဖိုရမ်က ကြီးကြပ်သူ ကိုဖြိုးမြင့်သိန်း ဒီရက်တွေအတောအတွင်း နောက်ဆုံးတင်ထားတဲ့ စာအုပ် ကလေးကိုယ် ကိုယ်တိုင်ဘဲ မြန်မာပြည်ကဝယ်လာ ပြီးတော့ Scan လုပ် စာအုပ်ထုတ်ပြီး မိမိကိုယ်ပိုင် Gtalk ရဲ့ custom message box မှာ ဒေါင်းကြပါဗျာ၊၊ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ မကောင်းဘူးထင်ပါတယ်၊၊ တကယ်မသိလို့ လုပ်ဒါဆိုရင် ဘာမှ ပြသာနာမရှိပါဘူး၊၊ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် မူရင်းပြုလုပ်သူ အင်တာနက်ပေါ်ကိုယ် ရောက်လာအောင် ပြုလုပ်ထားတဲ့ စေတနာကိုယ်တော့ အလေးထားသင့်ပါတယ်၊၊
Last edited by kyaukphyu; 29-11-2010 at 06:39 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 15 ဦးတို့မှ kyaukphyu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သန့်ဇင်ဌေး, အောင်လံလေး, arkaraung, AZM, bonge, centurymg, hellboy, khit100, ko lin, KznT, ooooko, sawlinux, thureinsoe, udku, yawnathan
ပြန်စာ - Password တဲ့လား!
Find More Posts by hninshweyi
ဟုတ်ကဲ့ ကျနော် Mediafire / Ifile လင့်ခ်များကိုယ် မူရင်းပို့စ်မှာ ပြန်လည် edit လုပ်ထားပါပြီ၊၊ Mediafire / Ifile လင့်ခ်များမှ ဒေါင်းလုတ် မချတတ်သေးဘူးဆိုလျှင် ကျနော်တို့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေနှင့် ဆွေးနွေးထားတဲ့ အချိန်တို အတွင်း မိသားစုနှင့် အကျွမ်းဝင်ဆိုတဲ့ ဒီနေရာလေး ကိုယ် လာရောက်ပေးပါခင်ဗျာ၊၊ စတင်ကိုင်တွယ် သုံးစွဲနေပြီ လို့ သိရတဲ့အတွက် အခက်အခဲများရှိလျှင် အကူအညီ တောင်းပါ၊၊ ကျနော် တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေး သွားပါမယ်၊၊
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ kyaukphyu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
26-11-2012, 08:19 AM
ကိုkyaukphyu တင်ထားတဲ့လင့်တွေက ဒေါင်းလို့မရတော့လို့ အဆင်ပြေရင် ပြန်တင်ပေးပါလား.....ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Find More Posts by ooooko
အကိုရေ Link တွေ သေနေပီဗျ အဆင်ပြေရင် ပြန် တင်ပေးပါလားဗျ ...
Complex Passwords များအား မှတ်သားခြင်း KznT အထွေထွေဗဟုသုတ008-04-2010 03:04 AM
BIOS password Bypass & Reset ပြည့်ဖြိုး ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာတိုလီမုစများ428-06-2009 03:42 PM